Studio 7 Headlines, Monday, June 6, 2016
Air Zimbabwe pilots, who have not been paid since 2013 and are currently living on allowances, today told parliament that their conditions of service are so bad that some of their colleagues have left the state-controlled company for greener pastures.
Zimbabwe’s Anti-Corruption Corruption is expected to investigate several companies and individuals of engaging in shady deals that have cost the nation millions of dollars in potential revenue.
Zimbabwean women protesting at Africa Unity Square pressing the government to address the country’s ailing economy claim that they were sexually abused by unknown assailants over the weekend.
The Zimbabwe National Network of People Living with HIV has launched a booklet designed to create awareness on taking antiretroviral drugs and the management of HIV/AIDS.
And Zimbabweans celebrate the Warriors’ Africa Cup of Nations finals qualification with calls for the government to help in preparing the squad for the finals in Gabon.
This evening on Livetalk our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners about the Warriors’ participation in the 2017 Africa Cup of Nations.